Ogaden News Agency (ONA) – Sababta loo keenay mashruuca Alshabaab oo dhalinyaradii ree Jigjiga loogu fulinayo
Sababta loo keenay mashruuca Alshabaab oo dhalinyaradii ree Jigjiga loogu fulinayo
Todobaadadan waxaa magaalada jigjiga laga ururiyey dad badan oo u dhashay isla degaanka gaar ahaan gobalka Faafan. Dadkan uu ubadan dhalinyaro ayaa waxaa badankoodu ku xidh xidhanyihiin goobaha wax lagu xidh xidho qaarkamid ah sida saldhiga booliska gobalka Jigjiga, saldhiga booliska heer kilil, saldhiga boolisk degmada Jigjiga iyo xarunta gidhibka ee Hawaarinta (liyuu booliska).
Dhalinyaradan laxidh xidhay ayaa waxaa lagaga gudbayaa Bridge ama kaabad siyaasadeed oo uu Cabdi iley rabo taas oo ah in ay degaanka Alshabaab kajirto ama soo gashay si uu mashruuca nabadgalda ee lagu shaqeeysto uu usii balaadhiyo, oo dadka inta aan ONLF lagu shaabadeeynina Alshabaab loogu shaanbadeeyo. Sidoo kale inay noqoto mashruuc cusub oo Alshabaab la dagaalan ah laga gado Itobiya maadaama dawaladda dhexe ee Adisababa warbixina badan loogu geeyey in la tirtiray nabadiidkii ONLF.
Mashruucan ayaa ah mid salbalaadhan oyna kawada socdaan saraakiisha ciidanka qaarkamid ah oo uu general Abraham Wolde kamid yahay, iyo siyaasiyiinta Arimaha Dibadda oo raba inay caalamka u sawiraan in dagaalka Shabaabka uu ka bilowday Itobiya, maadaama ay jiraan eedeymo loo hayo Itobiya inay xidhiidh la leedahay Al-shabaabka.
Dhalinyaradan hada xidhan oo dhan ama kabadan 200 oo nin ayaan tan iyo intii laxidhay aan loo ogalaanin inay eheladadoodu soo booqdaan. Waxaana jira oo la xaqiijiyay in habeenkii lageeyo Gibidhibka halkaas oo lagu soo jildilo lagana yeedhsiiyo in ay qirtaan Shaabaabnimda iyo in aay doonayeen in ay wax qarxiyaan, garaacitaankaas oo aan laga joojinin ilaa inta ay ka qiranayaan ama ay nafbaxayaan. Hadafka laga leeyahay ee dadkan xidh-xidhan laga doonayo waa in hadhaw layidhaahdo intaas oo Shabaab ah ayaan xukunay ama dilnay ama aan jeelasha ku haaynaa si ay markhaati ugu noqoto Itobiya inay dagaal kula jirto Alshabaab. Arintaa ayaa walaac badan ku haysa eheladii dhalinyaradan faraha badan ee magaalada laga ururiyay.
Waxaa xusus mudan in maalin dhaweeyd nin miskiin ah oo garaacitaan iyo jidhdil nafta looga qaaday lasoo dhigay meeydkiisa xaafadooda oo kutaala isla magaaladan Jigjiga ninkaas oon waligii aan Jigjiga meelna uga bixin. Waxaa aad looga sii yaabay ninkaas qaabka loo dilay kadib markii qaab loo aaso lagaran waayey jidhkiisii oo burburay aawgeed.
Dhinaca kale direeyska ama tuutaha budhcadda liyuu booliska ayaa magaaladan Jigjiga kanoqday meherad lagu hel xoolo (sources of income). Direeyska ayaa lakala kireeysta habeenkii si dadka wadooyinka maraya iyo guryaha loogu baadho. Maxaysatadaa Hawaarinta qaarkood ayaa maadaama oy kacabsanayaan in lagarto waxay sameeyaan in ay direeyskooda udhiibaan cidkale oo muuqaalkiis ama magaciisa dadka kusoo baadhata taas oo hada gaadhay heer lakala kireeyso.